कलाकारको इनबक्स - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
कलाकारहरूले चलाउने फेसबुक तथा उनीहरूका पेजका पोस्ट त हामी सबैले देखिरहेकै हुन्छौं । हामीमध्ये कतिपयले ती पेज र पोस्ट लाइक गर्छौं, कमेन्ट गर्छौं । चित्त बुझे सेयर पनि गर्छौं, तर उनीहरूको फेसबुक इनबक्समा कस्ता खालका म्यासेज आउँछन् त ? त्यो भने रहस्यमै रहन्छ ।
महानायक राजेश हमालको फेसबुक एकाउन्टमा २ लाख २० हजार ९ सय ९३ फलोअर्स छन् भने ४ हजार ७ सय १६ जना साथी छन् । लामो समय भयो, महानायकको फेसबुक इनबक्समा दिनको सयभन्दा कम म्यासेज त आउँदै आउँदैन । विगतमा फोन र चिठीमार्फत कुरा हुन्थ्यो, महानायक हमालले लामो हाँसोसँगै कुरा खोलें, ‘सामाजिक सन्जाल फेसबुकको प्रयोगसँगै फोन र चिठी लगभग बन्दजस्तै भयो, फेसबुकमा म्यासेज गर्नेहरू अझ बढ्दै गए ।’ महत्वपूर्ण र आवश्यक परे रिप्लाई गर्छु, नत्र गर्दिनँ, हमालले भने, ‘आउने अधिकांश म्यासेज हेल्लो–हाई तथा सन्चो–बिसन्चोका हुन्छन् ।’ तीमध्ये केही अचम्मका म्यासेज पनि हुन्छन् कि ? हमालले भने, ‘भेटौं न प्लिज भन्नुहुन्छ । म पनि तपार्इंजस्तै कलाकार बन्न चाहन्छु, के गर्ने होला भन्नुहुन्छ । कसैले घरायसी समस्याहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ । कसैले प्रेमी–प्रेमिकाबीच तनाव उत्पन्न भएको कुरा समेत भनिरहनुभएको हुन्छ ।’
गायिका आस्था राउतलाई आउने म्यासेजमध्ये धेरै गुड मर्निङ र गुड नाइटका हुन्छन् । त्यसबाहेक मलाई प्रेमिका बनाउन खोज्नेहरूका म्यासेज पनि आउँछन्, राउतले भनिन्, ‘उहाँहरूले पठाउने म्यासेजमा प्रेम झल्कन्छ, कसैले पनि धम्कीपूर्ण म्यासेज गर्नुहुन्न । म पनि सधैं यस्तै माया गरिदिनुस् है भनेर रिप्लाई गरिदिन्छु ।’ कहिलेकाहीं तनाव दिने खालका म्यासेज आए भने तुरुन्तै ब्लक गरिदिन्छु, आस्थाले भनिन् । उनलाई कतिपयले मेरी छोरी पनि तपार्इं जस्तै होस् भन्छन् । कतिले मेरी छोरी, मेरी बहिनी तपाईंजस्तै गायिका होस् भन्छन् फेसबुक इनबक्समा । आस्थाले भनिन्, ‘तपाईंको नयाँ गीत कहिले सुन्न पाइन्छ, कहिले भेट्न पाइन्छ, तपाईंजस्तै गायिका बन्न मन छ, कसरी सम्भव होला जस्ता म्यासेज पनि आइरहन्छन् ।’ मैले राख्ने विभिन्न खालका फेसबुक पोस्ट हेरेर धेरैले मेरी बुहारी तपार्इंजस्तै राम्री र बुझ्ने भैदिए कस्तो होला पनि भन्छन्, आस्थाले थपिन् ।
पछिल्लो समयका चर्चित अभिनेता आयुष्मान देशराजलाई युवतीहरूका धेरै म्यासेज आउँछन् फेसबुकमा । फेसबुकमा युवाभन्दा पनि युवतीहरूका म्यासेज बढी आउँछन्, उनले भने, ‘उहाँहरूले भेट्न र बोली सुन्न भन्दै म्यासेज गरिरहनुभएको हुन्छ, म सकेसम्म कम मात्रामा रिप्लाई गर्छु ।’ के भन्छन् त म्यासेजमा युवतीहरू ? आयुष्मानले भने, ‘सधैं यस्तै राम्रा चलचित्रमा अभिनय गर्नुहोस्, तपाईंजस्तै ह्यान्डसम प्रेमी पाइयोस् जस्ता म्यासेज गर्नुहुन्छ । माया गर्नेहरूलाई मायाले धन्यवाद भन्दै रिप्लाई गरिदिन्छु ।’ कतिपयले इमोसनल र रोएर म्यासेज गर्नुहुन्छ, उनले भने, ‘सकेसम्म सबैलाई निरन्तर माया गरिदिनु है भनेर सम्झाउँदै आएको छु ।’
गायक शिव परियार विवाहित भएकाले पनि होला, उनलाई प्रेमपूर्ण म्यासेज कमै मात्रामा आउँछन्, परियारले भने, ‘नजिकका साथीभाइ, आफन्तहरूसँगै फेसबुकमा आउने अधिकांश म्यासेजमा हेल्लो हाई, भेट्न चाहन्छु, कुरा गर्न चाहन्छु जस्ता कुरा हुन्छन्, –उनले भने ।
अभिनेत्री रेखा थापालाई आउने म्यासेज अलिकति फरक खालका छन् । कलाकार भएकाले दर्शकहरूको म्यासेज आउनु सामान्य हो, रेखाले भनिन्, ‘श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा परे पनि म्यासेज आउँछन् । कतिपयको प्रेमसम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुन्छ, त्यतिबेला पनि सुझाव माग्दै म्यासेज गर्छन् ।
कसैले पैसा खाइदियो भने पैसा उठाइदिन हेल्प गर्नुस् भन्ने खालका म्यासेज पनि उत्तिकै आइरहेका हुन्छन् ।’ केही समयअघि मात्र एक जना महिलाको म्यासेज आयो, घरमा निरन्तर झगडा भएर डिभोर्ससम्म गर्ने सोचमा पुग्नुभएको रहेछ उहाँहरू, रेखाले भनिन्, ‘तर मैले उहाँको फोन नम्बर मागेर कल गरी सम्झाइ–बुझाइ गरेपछि समस्या समाधान भयो ।’ केही महिनाअघिको कुरा हो, एक युवालाई बलात्कारको झमेलामा पार्नुभएछ कुनै युवतीले । ती युवाले रेखाको फेसबुकमा म्यासेज गरेपछि उनले ती युवाको समस्याका बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिन् । ती युवतीले युवालाई १ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने रहेछ, युवतीले बलात्कारको झमेलामा पारेपछि पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने आइडिया लगाउनुभएको रहेछ, जुन कुरा रेखाले थाहा पाइन् । यो समस्या समाधानका लागि मैले विशेष पहल गरें, अभिनेत्री थापाले भनिन् । त्यसबाहेक धेरै घरायसी एवं व्यक्तिगत समस्या आइरहन्छन् । नयाँ कलाकारहरूले कसरी तपाईंजस्तै कलाकार हुन सकिन्छ भनेर म्यासेज गर्छन्, रेखाले बताइन् । उनलाई तपार्इंजस्तै हक्की स्वभावकी कसरी हुन सकिन्छ, यो मान्छेले अनावश्यक तनाव दियो, धम्की दियो जस्ता म्यासेज पनि आउँछन्, रेखाले भनिन्, ‘म ती समस्या सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेकी हुन्छु ।’
अभिनेत्री ऋचा शर्मा हक्की स्वभावकी छिन् । अभिनयमा राम्रो दख्खल राख्ने ऋचालाई आउने अधिकांश म्यासेज युवतीका हुने गरेका छन् । उहाँहरूले कसरी तपाईंले जस्तै अभिनय गर्न सकिन्छ, कसरी तपाईंको जस्तै कन्फिडेन्ट बढाउन सकिन्छ जस्ता म्यासेज गर्नुहुन्छ, ऋचाले भनिन्, ‘उहाँहरूले मलाई ह्यारेसमेन्ट भएको छ, कसरी ठिक पार्ने भन्नुहुन्छ । म सकेसम्म ती समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छु । आफू कसरी जोगिएर हिँड्ने, समस्या ठीक पार्न कसरी आवाज उठाउने देखि हरेक कुरामा सहयोग गरिरहेकी हुन्छु ।’ मेरो अभिनयको प्रशंसा गरेर कसरी तपाईंजस्तै कलाकार हुन सकिन्छ, कुन बाटोबाट कलाकारितामा आउनुपर्छ जस्ता म्यासेज गर्नेहरू पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । यसबाहेक हेल्लो–हाई गर्ने, प्रेमप्रस्ताव गर्ने त सामान्य भैहाल्यो, –ऋचाले भनिन् ।
अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई नयाँ वर्ष, दसैं–तिहार तथा विभिन्न चाडपर्वमा शुभकामना म्यासेज बढी आउँछन् । कतिपय प्रशंसकले भने बिहानदेखि साँझसम्म अपडेट सोधिरहेका हुन्छन् । कतिपयले स्टाटस र तस्बिर राख्नेबित्तिकै त्यसको प्रतिक्रिया इनबक्समै दिनुहुन्छ, उनले थपिन्, ‘यसबाहेक कतिपयले प्रेमप्रस्ताव राख्ने काम त कतिपयले अनावश्यक म्यासेज गर्ने काम गर्छन् । यद्यपि अधिकांश म्यासेज मलाई मन पराउने, मेरा शुभचिन्तकहरूबाट आएको मैले अनुभव गरेकी छु ।’
नेपाली गायकहरूमा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो— प्रमोद खरेल । प्रमोदले हजारौं प्रशंसक कमाएका छन् । उनी फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सन्जालमा निकै सक्रिय पाइन्छन् । प्रशंसकहरूले म्यासेज गरेर हैरान गराउने प्रमोद बताउँछन् । उनले भने, ‘तपाईंको नम्बर दिनुस् फोन गर्छु, बोली सुन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ । कतिपयले क्रिकेटका लागि केही गर्नुस् भन्नुहुन्छ । कन्सर्ट र विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा पुगेका बेला खिचिएका तस्बिर पठाउनुहुन्छ । कतिपयले बिरामी छु, सहयोग गर्नुस् भन्नुहुन्छ । प्रेमप्रस्ताव गरिएका म्यासेज पनि टन्नै आउने खरेल बताउँछन् ।
गायक कमल खत्रीलाई आउने अधिकांश म्यासेज युवतीका हुन्छन् । धेरैले प्रेमप्रस्ताव राख्नुहुन्छ, उनले भने, ‘तपाईंको बोली सुन्न चाहन्छु, म्यासेज हेरेर रिप्लाई गरिदिनुस् न भन्नुहुन्छ ।’ भेट्न चाहनेहरूले पनि निरन्तर म्यासेज गरिरहनुभएको हुन्छ । कतिपय त बिहान गुड मर्निङदेखि साँझ शुभरात्रिका म्यासेज निरन्तर गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, खत्रीले भने ।